Xaq miyaan u leeyahay in aan qiimeeyo shaqada shaqaalaha inta lagu guda jiro wareysiga xirfadeed?
Posted by Tranquillus | Mar 18, 2021 | Shabakada
Wareysiga mihnadlaha ah: wareysi ka duwan wareysiga qiimeynta
Shirkadaha oo dhami waa inay dejistaan ​​wareysiyo xirfadeed dhammaan shaqaalahooda, iyadoon loo eegin xooggooda.
Wareysigani wuxuu diiradda saarayaa shaqaalaha iyo jidkiisa shaqo. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fiican uga taageerto rajada horumarinta xirfadeed (isbeddelka booska, dallacaadda, iwm.), iyo inaad aqoonsato baahidiisa tababarka.
Mabda 'ahaan, wareysiga xirfadeed waa in la sameeyaa 2dii sano ee kasta ka dib markii uu ku soo biiro shirkadda. Dhamaadka 6 sano oo joogitaan ah, wareysigan wuxuu suurtogal ka dhigayaa in la sameeyo tiro koob kooban oo ku saabsan mihnaddiisa shaqo ee shaqaalaha.
Wareysi xirfadeed ayaa sidoo kale loo fidiyaa shaqaalaha dib u bilaaba howlahooda maqnaanshaha qaarkood.
ma, kuma sii wadi kartid qiimeynta shaqada qofka shaqaalaha ah inta lagu gudajiro wareysigan xirfadeed.
Xaqiiqdii, qiimeynta xirfadeed waxaa la sameeyaa inta lagu gudajiro wareysi gooni ah inta lagu gudajiro oo aad soo diyaarinayso natiijooyinka sanadkii la soo dhaafay (howlgalada iyo howlaha la qabtay ee la xiriira ujeeddooyinka la dejiyay, dhibaatooyinka la soo maray, qodobbada lagu hagaajinayo, iwm.). Waxaad dejisay hadafyo sanadka soo socda.
Wareysiga qiimeynta waa ikhtiyaari ka duwan wareysiga xirfadeed.
Si kastaba ha noqotee, waad sameyn kartaa labadan wareysi isdaba-joog ah, laakiin ...
Xaq miyaan u leeyahay in aan qiimeeyo shaqada shaqaalaha inta lagu guda jiro wareysiga xirfadeed? July 8th, 2021Tranquillus
READ Xiritaanka iskuulka: xalka waalidiinta ay tahay inay daryeelaan caruurtooda
horeSaxeexa emailka xirfadlaha ah
socdaJoojinta heshiiska heshiiska heshiiska ee heshiiska labada dhinac: sababta ma khusayso
Parallax saameyn ku leh PowerPoint 2019
Maareynta Agile… Jawaabta degdegga ah ee dhibaatada, mise qaab waara?
Kaaliyaha iibka: tababar ku siinaya baalal